Archive du 21-juin-2022
Savorovoro tany Nosy be Olona 8 nosamborina, misy ireo naratra
Miha mangotraka ny toe-draharaha ao Nosy Be Hell Ville eo anatrehan’ny fanagadrana an’i Ninie Donia. Ity mpanakanto mpanjakavavin’ny salegy,
Tena misy fahadiovam-po ve ?
Nafana ary niavaka ny hetsika ara-pivavahana, fiderana sy antsam-panahy goavana teto an-dRenivohitra ny faran’ny herinandro teo.
Andoharanofotsy Nahitana fatim-behivavay tao anaty Dalle
Akory ny hahatairan’ireo olona teny Andoharanofotsy omaly. Vehivavy iray manodidina ny 40 taona teo ho eo mantsy no nifatotra gony ny tendany raha araka ny vaovao azo ary nisy nanary tao anaty dalle.
Fanadinana CEPE Mahatratra 525.111 ireo mpiadina manerana ny Nosy
Hotontosaina anio talata 21 jona manerana ny Nosy ny fanadinam-panjakana CEPE. Mahatratra 525.111 ny isan’ireo hiatrika izany manerana ny Nosy ka 6 taona no kely indrindra. Miisa 20.869 amin’ireo kosa
Génération 2000’s “Tongava eny Antsahamanitra fa mandalo ny fiainana”
Tongava eny Antsahamanitra fa mandalo ny fiainana, hoy omaly ny fanentanan’ireo mpanakanto nofantenan’ny SR Event hampahatsiahy ny hira sy kalo tena nambabo ny fon’ireo zatovo sy tanora tany amin’ny taona 2000 tany.
Fisorohana ny fipoahana ara-tsosialy Hatao 500 miliara Ar ny fanohanana ny Jirama…
Mieritreritra hampiakatra ho 500 miliara Ar ny fanampiana ara-bola ho an’ny Jirama ny Fanjakana amin’ity taona 2022 ity.
Mpaminany Dieu Benis Chylhe Miantso ny Malagasy tsy ho kivy
Matetika mandalo eto Madagasikara aho hatramin’ny 2015, hoy ny mpaminany Kaongoley, Dieu Benis Chylhe.
Banky Iraisam-pirenena “Niampy 1,4 tapitrisa ny tsy ampy sakafo eto”
Mitohy ny tsindro-paingotry ny Banky Iraisam-pirenena amin’ny alalan-dRtoa Marie-Chantal Uwanyiligira solontenany eto Madagasikara.
Sekoly sy trano fianarana Hafa ny sary aparitaka, fa hafa mihitsy ny tena zavamisy
Anio tontolo andro no hiatrika ny fanadinana Cepe ireo mpianatra taona faha 5 miisa 525.111 manerana ny nosy.Izay no hamarana ny taom-pianarana ho an’ny ambaratonga fototra.
Antananarivo renivohitra Nampiteny ny moana ny fitohanan’ny fiara omaly
Herinandro mialohan’ny fetin’ny 26 jona dia efa tena mampiteny ny moana sahady ny fitohanana eto an-drenivohitra.
Naverina 5 isaky ny seza ny taksibe Pi-maso noho ny ho fampiakarana vidin-tsolika ?
Nivoaka omaly alatsinainy 20 jona 2022 ny didim-pitondrana faha-135/2022-MID/PRF.POL izay navoakan’ny Prefektioran’ny Polisy eto Analamanga,
Fikambanam-pirenen’ny mpitsabo nentim-paharazana “Tohina tolona hahatongavana amin’ny tena fahaleovantena izao”
Fikambanana natsangana hisahana ny lafiny ara-kolontsaina momba ny fitsaboana ny fikambanam-pirenen’ny mpitsabo nentim-paharazana na ANTM, hoy ny filohany, Josephin Andriandrainarivo.
Fandrindram-piterahana Manamafy ny fanohanany ny Amerikanina
Manohana hatrany an’i Madagasikara ny Amerikanina mba hahatratra ny "dividende démographique" na ny fitomboan’ny harin-karena miainga amin’ny fiovan’ny firafitry ny sokajin-taonan’ny mponina,
Tontolo politika Miha vitsy ireo sahy miaro fitondrana
Mihena mba tsy hilazana fa tsy dia ahitana olona manao ireny akanjo t-shirt volomboasary misy ny sarin’ny Filoham-pirenena ankehitriny ireny intsony eny amin’ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny.
Tsenan’ny Coum 67 ha Nitombo avo roa heny ny habeny
Nitombo avo roa heny ny haben’ny tsenan’ny Coum etsy amin’ny 67 ha. Tafakatra 2.200 isa ireo mpivarotra ho
Fiarovan-tena amin’ny Covid 19 Mahatohitra valanaretina kokoa ireo olona vita vaksiny
Miha mitombo ireo mararin’ny valanaretina coronavirus tato anatin’ny 3 herinandro izao indrindra fa ho an’ny faritra Analamanga, izay be olona mifamezivezy.
Hala-jaza Dadatoan’ireo ankizy ihany no ahiahiana
Lehilahy iray 25 taona ahiahiana ho nangala-jaza mianadahy 08 sy 10 taona ny sabotsy 18 jona no nosamborina tany Mahabo.
Antoko politika MMM “Mila ampiana ny sehatra tsy miankina”
Nifanakalo hevitra sy nifampihaino tamin’ireo mpianatra mpikaroka tao Fenoarivo atsinanana ny zoma teo sy tao Toamasina ny sabotsy 18 jona teo,
Elakelan-tranon’Ampandrana Tratra ilay rangahy mpivarotra rongony rôrô
Lehilahy iray no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP3 Antaninandro ny omaly alatsinainy 20 jiona 2022 rehefa nahatrarana rongony maherivaika héroine.
Fahasalaman’ny olona varira Vidiana 90.000 Ar ny crème iray tsy maintsy hampiasaina
Homamiadan’ny hoditra no mahatonga ny olona iray ho lasa varira, raha araka ny fanadihadiana natao. Vao teraka izy dia efa mitranga izany,